दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस:ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस
अनन्त जीवनको ठूलो महानतामा रमाइलो गर्नको लागि आफ्नो जीवनलाई अझै उदात्त बनाउनुहोस्। चिन्ता नहुनु यो दिशामा पहिलो कदम हो। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ।
संलग्न भएकाहरूले आफ्नी भावि पत्नीमा ठूलो आनन्द पाउनेछन्। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातचीत गर्दा आफ्ना कान र आँखा खुल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्यवान टिप पाउन सक्नुहुन्छ।
आफ्नो सामाजिक जीवनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्नो परिवारसँग पार्टीमा जानुहोस्। यसले तपाईंको दबाब मात्रलाई राहत दिंदैन, हिचकिचाहट पनि हटाउँछ।
मोमबत्तीको उज्यालोमा प्रियसँग खाना खानुहोस्। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्।
एउटा पुरानो मित्रले दिनको पछिल्लो भागमा रमाइलो भेट गर्नेछ। तपाईंको प्रेम बहुमूल्य कुराहरू जस्तै ताजा राख्नुहोस्। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने –
त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ।
खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋण लिएको हुन्छ – केही दुखको आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ।
तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। साथीहरूसँग रोमाञ्चक र मनोरंजक कुरा गर्ने सही दिन। प्रेम सम्बन्धमा दास जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्।
सबैको मद्दत गर्ने तपाईंको इच्छाले तपाईंलाई थकित र शक्तिहीन बनाउनेछ। आफ्नो प्रेमीसँग बदला लिने हुँदा कुनै पनि परिणाम प्राप्त हुँदैन – बरु तपाईंले शान्तिसँग आफ्नो प्रेमीसँग आफ्नो साँचो भावना पोख्नु पर्छ।
तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ –
र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकावले बेलुकीतिर तपाईंको मन ढाक्नेछ।
तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। पुरानो सम्पर्क र सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने राम्रो दिन।
रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो काममा प्रगति देख्न सक्नु हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईंले आफ्नो दैनिक तालिकाबाट समय निकालेर आज आफ्ना साथीहरूसँग बाहिर जानुपर्छ। आज आफ्नी प्रियतमासँग शिष्टतासाथ व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईंले सही मानिसहरूलाई आफ्नो कौशल र प्रतिभा देखाउनु भयो भने चाँडै नै नयाँ र राम्रो सार्वजनिक छवि बनाउनु हुनेछ।
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। योग्यहरूका लागि वैवाहिक साँठगाँठ हुनेछ।
यसको लागि केही समय लिनुहोस्। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ।
अरूसँग खुसी क्षणमा भागीदारी हुनाले तपाईंको स्वास्थ्य फूल्नेछ। तर सावधान रहनुहोस्। यदि यसो गर्नुभएन भने तपाईंलाई पछि समस्या हुनेछ। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सही समय हो।
जीवनको राम्रो र नराम्रो कुराहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! नयाँ ग्राहकहरुसँग बातचीत गर्ने यो एउटा अद्भुत दिन हो।
तपाईंमा असीम ऊर्जा र उत्साह आउनेछ र तपाईंले आफ्नो फाइदाको लागि कुनै पनि मौका प्रयोग गर्नु हुनेछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्।
नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। तपाईंको ऊर्जाको स्तर उच्च हुनेछ – किनकि तपाईंको प्रियले धेरै आनन्द लिएर आउनेछ। काममा तपाईंका प्रतिद्वन्द्वीले आज आफ्ना नराम्रा कृत्यको परिणाम प्राप्त गर्नेछन्।
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस – कसैले तपाईंलाई धेरै नजिकबाट हेरिरहेको छ र तपाईंलाई विशेष व्यक्ति ठान्दछ – प्रशंसनीय कामहरू मात्र गर्नुहोस् जसले तपाईंको प्रतिष्ठालाई अझै उठाउन सक्छ।
यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रेम र दया दिनुहोस्। तपाईंले चिनेका महिलाहरुको मार्फत कामको लागि अवसर आउनेछ।
Prevकोरोनाको भ्याक्सिनको विषयमा विश्वमा के हुँदैछ, नेपालले के गर्नुपर्छ ? पूरै पढ्नुहोला
Nextराष्ट्रपतिदेखि शिक्षकसम्मको तलब-भत्ता रोक्नुपर्छ , जनता मात्र किन भोकै? : डा. बाबुराम भट्टराई